Cusboonaysii Ogosto 2021 - Mashruuca Waqooyiga SeaTac Park ayaa laga saaray SAMP | SAMP
Bishii Ogosto 25, 2021, Maamulka Duulista Hawada ee Federaalka (FAA) ayaa sii daayay warka wanaagsan in mashruuc ka socda Waqooyiga SeaTac Park laga saaray Qorshaha Master Sustainable Airport (SAMP) ee Seattle-Tacoma International Airport (SEA).
Markii hore, soo jeedin loo yaqaan “L06 ″ oo ku jirta SAMP waxay ku talisay in la dhigo baarkin dusha sare ah oo ku yaal koonfurta koonfur ee Waqooyiga SeaTac Park. FAA waxay go'aansatay inay soo saarto natiijada gabagabada ay ku gaartay L06 taasoo qayb ka ah dib-u-eegista deegaanka ee Mashaariicda Waqtiga-dhow.
Waxaan ognahay in soo jeedintani ay tahay mid ay aad u daneyneyso ayna u badan tahay inay quseyso xubnaha bulshada. Shaqada deegaanka ee Dekedda ayaa soo bandhigtay soo jeedintan goor hore, xitaa iyadoo ay sii socoto falanqayn kale, tanina waxay u noqon doontaa war soo dhaweyn dad badan oo danaynaya. Fadlan akhri bayaankan wixii faahfaahin dheeraad ah.